JINGHPAW KASA: ဦးလရှီးလနူးကို ဗမာစစ်သားများ မတရားဖမ်းဆီးရိုက်နက်
ဒီဇင်ဘာ (၈) စနေ
ဗမာစစ်တပ်မှ ပစ်သတ်ခဲ့သော အပြစ်မဲ့
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မြောက်ဘက်ပိုင်း တန်ဖရဲကျေးရွာမှ ကချင်တိုင်းရင်းသား ဦးလရှီးလနူး ကို ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် တပ်မ (၃၃) လက်အောက်မှ စစ်သားများက ဒီဇင်ဘာ (၇) ရက်နေ့ည (၈း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် မတရား ရိုက်နက် နှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဦးလရှီးလနူးသည် အောင်မြင်သာကျေးရွာ တန်ဖရဲကျေးရွာသို့ လွန်ခဲ့သောနှစ်က ဗမာစစ်သားများ ပစ်သတ်ခဲ့သော ဦးလတောင်၏ တစ်နှစ်ပြည့် အောက်မေ့သတိရ ဆုတောင်းပွဲမှ အပြန် ဆွမ်ပရာဘွမ် လမ်းဆုံတွင် ဗမာစစ်သားများမှ ဖမ်းဆီး ရိုက်နက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဗမာအစိုးရ စစ်သားများမှ ဦးလရှီးလနူး၏ အဖိုးတန် ကချင်ရိုးရာ ဆွဲကြိုးကိုလည်း လုယူသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယခုအခါ ဦးလရှီးလနူးသည် ဗမာ စစ်သားများ၏ မတရားရိုက်နက်ထားမှုကြောင့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေရှိကြောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် တစ်ကိုယ်လုံးကို ရိုက်နက်ထားပေးပြီး၊ မျက်နှာကိုလည်း ဓါးမြောင်နှင့် ထိုးထားပေးကြောင်း ဒေသခံများမှ တဆင့် သိရှိရပါသည်။
Dashi La Nu has been tortured from Burmese government troops from (88) Division in Tang Hpre village, it is located northern part of Myitkyina, Kachin state, at 08:00 PM on 7th December, said the villagers. When Dashi La Nu came back from La Tawng, who had been killed last year by Burmese Government soldiers, memorial praying service from that village, at the Sumprabum junction Burmese Government soldiers arrested and beat him the whole body especially on the head and face junction and mobbed his traditional necklace. Now, he has been injured seriously and becomes dangerous situation.
ဗမာစစ်သားတွေ သေနာကောင် ဒီထက်မကပိုသေမယ်
don't do like that.
Morther fucker burmese military..
အဖြစ်မှန်က KIA က ရိုက်တာပါ အဲဒါကို ပြီးမှ ဗမာ စစ်သားဆိုပြီး မီဒီယာတွေ ကို တင်ခိုင်းလိုက်တာပါ
Ndai jinghpaw kasa kaw comment ka ai ni kaw na marai langai lahkawng gaw myen sawa niagwi gayat shing na rai taw nga ai. Ra hpe n re, n re hpe re nga ka ya nga ai. Atsawm sha jawm sagawn la nna nga chyaw si hte n gup kaw abraw bang ya ga yaw.
anhte myusha ni comment jaw yang myit kalu let jaw ga.ngumayu ai gaw myen ni nan comment hpe kam ai hku mai ka taw ai majaw mung myen ni ka ai rai na re.anhte mu mada ai hpe sha atsawm Ga hkra hkra hte sha ka ga.Pawt ai hku na ka jang shut wa chye ai le.anhte ndai majan dang na re ngu hkrak kam ai,lama na K.K gaw anhte hpe sasana matut kalaw shangun ai rai yang ngu ai ga.anhte sum yang anhte sasana kalaw tim n awng dang sana re,Hkrung ai K.K ngu nmai tsun mat ai nhtoi myen mung kaw du mat na ra ai.
Myen sa wa dai ni yawng bawm kabye hkrup na si u ga.K.I.A ni gap ai pala yawng n prai ai sha hkra si mu ga.Shanhte shada shut gap nna kadang si mu ga. Sawa shachyang ni e!
unyo htun said...
mother fucker KIO/KIA